ColorOS 11 | OPPO မြန်မာ
သင့်အကြိုက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သော နောက်ဆုံးပေါ် Android 11
Android 11 ပေါ်တွင် အခြေခံထားသော ColorOS 11 Beta ဗားရှင်းသည် ယခုအခါ ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းအဆင့်မြင့်ဗားရှင်းကို ယခုလက်ရှိတွင် OPPO Find X2, OPPO X2 Pro နှင့် Find X2 Pro Automobili Lamboghini ထုတ်ကုန်များတွင်သာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Reno4 နှင့် Reno3 အပါအဝင် အခြား မော်ဒယ်၂၅ မျိုး ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ 10
ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြသမည့်စာသားအား မိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
သင်ကိုယ်တိုင်က တီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းသော ပါရမီရှင်တစ်ဦးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်
တီထွင်ဖန်တီးမှုဟာ လူတိုင်းအတွက် နေရာတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် စိတ်ကွန့်မြူးစရာများနှင့် ကြုံဆုံလာချိန်တွင် သင့်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ဖန်တီးခြင်းဖြင့် သင့်တီထွင်မှုစွမ်းရည်ကို ပြသလိုက်ပါ။ ဒီဇိုင်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ ရေးသားခြင်းတို့အတွက် စိတ်ကြိုက်စာလုံးဖောင့်ပုံစံနှင့် ထားသိုမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ရန် အနည်းငယ်သာ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 1
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့
ဖုန်းအဝင်တီးလုံးများကို ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးခြင်း
သင့်ဖုန်းအတွင်းမှ အသေးစား ဂီတစတူဒီယို
တေးအယ်လဘန်ထဲမှ အကြိုက်ဆုံးတေးသီချင်းကို ရွေးချယ်၍ သံစဉ်ပြောင်းလဲပေးခြင်း၊ နှစ်သက်သော တူရိယာအသံများ ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဖုန်းအဝင်တီးလုံးအား MP3 ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ သင့်ဘလော့အတွက် နောက်ခံတေးဂီတအဖြစ် ထားရှိနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ထားရှိနိုင်သော Dark Mode
အမှောင်ထဲတွင် ထားရှိရမည့် Dark mode ကို ပြတ်သားမှုအဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ပေးထားပြီး နေ့ရောညပါ ကြည့်ရှုရအဆင်ပြေစေရန် အလင်းရောင်အား အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ထိုပြတ်သားမှုအဆင့်များအား တတိယအဖွဲ့အစည်း app များကိုပါ ပံ့ပိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
နူးညံ့ညင်သာသော အလယ်အလတ် ပိုမိုတိုးတက်ခြင်း
အနုပညာရှင်များဖန်တီးထားသော ဖုန်းနောက်ခံပုံ ပရောဂျက်
ကမ္ဘာကြီးအား အနုပညာအမြင်ဖြင့် ကြည့်ရှုခြင်း
ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးအား အနုပညာစွမ်းပကားဖြင့် ထိုးဖောက်၍ လွယ်ကူရိုးရှင်းသော လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုအား လုပ်ဆောင်ခြင်း : မြောက်များစွာသော မှန်ဘီလူးများမှတဆင့် ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားသော ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ပုံရိပ်များနှင့် သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်များထဲမှ ထူးခြားဆန်းပြားသော ကမာ္ဘငယ်ကို ဖန်တီးတင်ဆက်ထားပါသည်။ သင့်လက်ဖဝါးထက်က အနုပညာကမ္ဘာကြီးကိုရှုစားကြည့်ပါ။ 2
လက်ချောင်း ၃ ချောင်းဖြင့် အလျှင်အမြန် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ခြင်း။
လက်ချောင်း ၃ ချောင်းဖြင့် ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို screenshots ပေး၍ အလျှင်အမြန် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ခြင်း။ စာရွက်စာတမ်းများအား ဖတ်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားမှ မိတ်ဆွေဖြင့် စကားပြောဆိုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စမတ်ဘေးဘားတန်းကို အသုံးပြု၍ သင့်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ စာသားများအား ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဒေတာများကို အခမဲ့ မျှဝေနိုင်ခြင်း
မိုဘိုင်းလ်ဒေတာများနှင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းများက မိတ်ဆွေအချင်းချင်း ဖိုင်များ မျှဝေခြင်းအတွက် အဟန့်အတား ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ နီးစပ်ရာ android ဖုန်းများ အချင်းချင်း ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ APK package များကို ဒေတာအကုန်အကျမရှိဘဲ အလွယ်တကူ မျှဝေနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ 3
Apps များကိုခြုံ၍ တပြိုင်နက် အသုံးပြုခြင်း
Apps တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
အငှားယာဉ် ငှားခြင်း၊ စာတိုပြန်ခြင်းနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအနက် မည်သည့်အရာကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လိုပါသနည်း။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းပေါ်တွင်ပင် ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို တပြိုင်နက်ထည်း လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ FlexDrop က ဝင်းဒိုးများ၏ အရွယ်အစားကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို တပြိုင်နက်အဆင်ပြေပြေလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။4
မြောက်များစွာသော animation အင်ဂျင်
ချက်ချင်းတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသည့် သဘာဝကျသော animations ကာတွန်းရုပ်ပုံလေးများကို ဖန်တီးထည့်သွင်းထားခြင်းက သင့်အား ပြင်ပတွင် အမှန်တကယ်ထိတွေ့ခွင့်ရရှိသကဲ့သို့ ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အလိုလိုသိမြင်၍ စနစ်အားမောင်းနှင်နိုင်ခြင်း။
အရင်းအမြစ်များအား အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စနစ်၏ အရင်းမြစ်ထိရောက်မှုကို ၄၅%၊ စနစ်တုန့်ပြန်မှု ၃၂% နှင့် FPS တည်ငြိမ်မှုကို ၁၇% တိုးတက်စေရန်ပံ့ပိုးပေးသည်။
တစ်စက္ကန့်အတွင်း မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပုံရိပ်ပြသနိုင်သည့်နှုန်း Fame Rate ၏ တည်ငြိမ်မှု
အရင်းအမြစ်များအားလုံးကို မှန်ကန်စွာအသုံးပြု စီစဉ်နေရာချထားပေးနိုင်သောကြောင့် အသုံးလိုသည့်အခါတိုင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့နေအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Apps များကို ပုံမှန်ထက်ပိုမို၍ စမတ်ကျကျ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လွှင့်တင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Apps တက်ရန်အတွက် ငြီးငွေ့စွာ စောင့်ဆိုင်းနေရပါသလား။ သင်၏ နေ့စဉ်ဖုန်းအသုံးပြုမှု အလေ့အထကို လေ့လာ၍ သင်အသုံးပြုနိုင်သော app ကို ဖွင့်ရန် စနစ်မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်း၍ သင့်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Apps ကို လွှင့်တင်နိုင်သော အမြန်နှုန်းသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 23.63% ခန့်ပိုမိုတိုးမြှင့်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ 5
အချိန်တိုင်း ချောချောမွေ့မွေ့ဖြင့် တာရှည်ခံခြင်း
စနစ်မှ သင့်ဖုန်းအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းသော storage အတွင်းမှ ဖိုင်များကို အလိုအလျောက် ရှင်းလင်းပေးခြင်း၊ နေရာပြန်လည်ချထားခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖုန်းကို ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုသော ပထမဆုံးနေ့အသုံးပြုသကဲ့သို့ အဆင်ပြေချောမွေ့ကာ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သိမ်းဆည်းသည့် disk အတွင်းမှ ဖိုင်များကို ပြန်လည်နေရာစီစဉ်ချထားပေးခြင်း
Ram ကို ရှင်းလင်းပေးခြင်း
ပါဝါစား အထူးသက်သာစေသော mode
ဖုန်းအား ၅% ဖြင့် မိနစ် 90 စာ စာရိုက်စကားပြောဆိုနိုင်ခြင်း
ပါဝါစား အထူးသက်သာစေသော mode တွင် ဖုန်းအား အထူးသက်သာစေသည့် နည်းဗျူဟာများဖြစ်သည့် CPU ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်အလင်းကို ချိန်ညှိပေးခြင်း စသည်တို့ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် သင့်ဖုန်းဘက်ထရီကို ပုံမှန်ထက်ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း mode တွင် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိအနှစ်သက်ဆုံး apps ၆ ခုကို ရွေးချယ်ပေးထားနိုင်သောကြောင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အရှိန်မပျက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လုံခြုံစိတ်ချစွာအားသွင်းနိုင်ခြင်း၊ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အိပ်စက်နိုင်ခြင်း
ဘက်ထရီသက်တမ်းကုန်ခြင်းကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ အားအလွန်အကျွံသွင်းခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် သင်နေ့စဉ်အားသွင်းသောအချိန်များကို မှတ်သားထားပေးနိုင်ပြီး ညအချိန်တွင် အားသွင်းသည့်နှုန်းကိုပါ ထိန်းချုပ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် သင်အိပ်ယာမှ မနိုးထမှီဖုန်းအားပြည့်နေစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုကာကွယ်နိုင်ခြင်း
အန္တရာယ်ရှိသော App များကို တားဆီးပေးခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များကို အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ တတိယအဖွဲ့အစည်း app များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုသာ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ စနစ်အတွင်းမှ အများကြည့်နိုင်သည့် ဖိုင်ဖိုတာများဖြစ်သော (ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အော်ဒီယိုများ၊ စာဖိုင်အချက်အလက်များနှင့် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲထားသည့်အရာများအပါအဝင်) ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးတည်းသာ ရယူအသုံးပြုနိုင်သော နေရာတစ်ခု
ကိုယ်ပိုင်စနစ်တစ်ခုထားရှိခြင်းဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်အနေဖြင့် စနစ်တစ်ခုခွဲ၍ ဖန်တီးထားပေးခြင်းဖြင့် သင်အသုံးပြုသော apps နှင့် အချက်အလက်များသည် ပင်မစနစ်နှင့် ခွဲထွက်နေမည်ဖြစ်ပြီး ထိုစနစ်ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရန် လက်ဗွေသို့မဟုတ် လျို့ဝှက်နံပါတ်ကို အသုံးပြုဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 6
အချက်အလက်များကို လုံခြုံမှု အပြည့်အဝပေးနိုင်သော ထောက်ခံချက်
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များအား သိမ်းဆည်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်းတို့အတွက် အဆင့်မြင့် စာဝှက်နည်းပညာကို အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်အား တတိယအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ISO, ePrivacy နှင့် TrustArc တို့မှ ထောက်ခံမှုကိုလည်း ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
1. Beta ဗားရှင်းကို တသုတ်ချင်းစီ ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ ပေါ်လစီများအရ ၎င်း Beta ဗားရှင်းကို ဥရောပယူနီယံ၊ ဥရောပ စီးပွားရေးဧရိယာနှင့် အခြားကန့်သတ်ထားသော ဖုန်းလိုင်းမော်ဒယ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
2. ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြသမည့်စာသားအား မိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အချို့သော AMOLED မော်ဒယ် ColorOS 11 များတွင်သာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာချိန်မှသာ ကိုးကားရန်ဖြစ်သည်။
3. အနုပညာရှင်များဖန်တီးထားသော ဖုန်းနောက်ခံပုံ ပရောဂျက်ကို EU၊ ရှရှား၊ ကာဇာကစ်စတန် သို့မဟုတ် မက္ကစီကိုနှင့် စက်ပစ္စည်းအား ထောက်ပံ့မှု မပေးသော ဖုန်းလိုင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
4. အနီးအနား အချင်းချင်း ဒေတာများ မျှဝေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို Android 11 နှင့်အထက် စက်ပစ္စည်းများတွင်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
5. Apps များကိုခြုံ၍တပြိုင်နက်အသုံးပြုခြင်း FlexDrop ကို ColorOS11 များတွင် အစောဆုံး အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ၌ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
6. Animation ကာတွန်းပုံများဖြင့် ပြသထားသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် နောက်ခံလုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ်သာ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး စာမျက်နှာတစ်ခုအနေဖြင့် တည်ရှိခြင်းမရှိပါ။
7. ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကို ColorOS 11 များတွင် အစောဆုံး နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ ၌ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
8. ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးအတွက် အချက်အလက်များကို အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်တွင် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ထားသော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်များမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ရရှိမည့် အချက်အလက်များသည် အသုံးပြုသော အက်ပလီကေးရှင်း၏ လက်တွေ့အခြေအနေ၊ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်းတို့အပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်အားလုံးအား အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုပေါ်တွင် မူတည်၍ သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
9. ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပြသထားသော ကုန်ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပါဝင်သော အချက်အလက်များ (UI၊ UX၊ နောက်ခံများ ကန့်သတ်မထားသော်လည်း ပါဝင်မှုရှိသည်) သည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများသည် အသုံးပြုသော ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်း၊ လွှင့်တင်သည့်အချိန်နှင့် ပထဝီအနေအထားများအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများအားလုံးအား အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုပေါ်တွင် မူတည်၍ သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
10. ထုတ်ကုန်များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ တိုးတက်မှုရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းတွင်ပါဝင်သောအချက်အလက်များ (UI၊ နောက်ခံများ ကန့်သတ်မထားသော်လည်း ပါဝင်မှုရှိသည်)၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးတွင်ပြသထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။ ColorOS တွင် ပါဝင်သောအချက်အလက်များနှင့် တင်ဆက်သည့်ပုံစံတို့အား အမြဲအဆင့်တိုးမြှင့် update ပြုလုပ်နေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိသော ပြောင်းလဲမှုနှင့် ချိန်ညှိမှုများ အမြဲရှိနိုင်ပါသည်။